[Puntland] G.Baarlamaanka oo ku lug le Shirweynaha Somaliland ee [Hadaaftimo]
Sunday January 01, 2017 - 00:14:36 in Wararka by Super Admin
(Hadaaftimo Galgalanews.net) Somaliland ayaa daba ka riixaysa Shirweyne ay doonayaan inay ku soo xera-galiyaan dadka Gobolka Sanaag waxana loo balanansan-yahay Horaanta Sanadka Cusub ee curtay 2017
Ilo xogo-gaal ah oo ay Heshay Mareegta Galgalanews.net waxa Shirkaasi lagu qabanayaan Degmada Hadaaftim oo ah Gurigii Suldaan Siciid C/Salaam lagu Booqan Jiray ahan rugta uu Sida Rasmiga ah u degen-yahay Suldaan Siciid C/slaaam.
Somaliland Shirkaasi waxay ku tilmaan-tahay inuu daba socodo Shirarkii Awr-Boogaysay ee Beesha Dhulbahante & Somaliland Go'aamada ku kala saxeexdeen & Shirarka Khaatumo u Socda inuu la mid yahay kan Hadaaftimo isla markaana Go'aamo laga soo saari-doono.
Magaalada Hadaaftimo waxa ku sugan C/xakiin Wahaabi oo Somaliland u qaabilsan dhanka Deegaankaasi, waxana uu Durba bilaabay Go-Gol Xaadhka Shirka iyada oo la sugayo Axmed Xaaji Cali Cadami Wasiirka W.Gaashaandhiga oo Shirkaasi Abaabulkiisa ka soo dhaadhiciyay Suldaan Siciid oo ah Gacantiisa Midig.
Lama oga in Duubabka dhaqanka ee Gobolka Guud ahaan ay isku waafaqayaan Shirkaasi, hase ahaatee Garaad Cabdullaahi Cali Ciid & Ugaas Maakhari, Suldan M.C/laahi Cartan ayaa loo badinayaa inaanay Haba yaraatee qayb- ka noqon Shirkaasi Somaliland riixayso.
Puntland oo dhankeeda sheegta inay Sanaag ka taliso ilaa haatan lama hayo wax qorshe ah oo cad, waxana muuqata in Siyaasiyiinta uu ka mid yahay Gudoomiyaha Baarlamaanka oo Reer Hadaaftimo ah ay Dhabar-jab weyn ku tahay in Magaaladiisii oo ah Xunduntiisii Hadaaftimo ay Somaliland Shir-weyne ku qabato.
Baadhitaan qota dheer oo Warbaahintu samaysay & xidhiidho waxa isa soo taraya in Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland aanu Mooganayn Shirweynahaasi isla markaana uu hoose ka hurinayo in shirkaasi dhaqan Galo.
Baarlamaanka Puntland ayaa looga fadhiyaa inay Su'aalo ka keenaan arrintaasi meel ka dhaca & Jabinta Dastuur ah madaama Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland uu Gacan-saar hoose oo qarsoon la leeyahay Somaliland.